"Lospirin": yokusetshenziswa, nozakwabo yangempela
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwalesi sifo esiyingozi ezifana isilethikusebenza, ukusebenzisa amalungiselelo zokwelapha based acetylsalicylic acid. Antiplatelet kanye ejenti eqeda ukuvuvukala has "Lospirin". Yokusetshenziswa likuchaza ngokuningiliziwe zokwelapha umphumela, izinkomba kanye nemithetho ukuthatha imithi. Ngaphambi kokuba uqale ejenti ukwelashwa kufanele kube ujwayelene izinkomba kanye contraindications ephathelene nokusetshenziswa futhi qiniseka bonana nodokotela wakho kuqala.
The main ingxenye esebenzayo izibhebhe "Lospirin" kuyinto acetylsalicylic acid, esetshenziswa njengendawo zokuvimbela eyinhloko yokufa uhlangothi nokumelwa yinhliziyo.
Omunye sibhebhe sinamaphutha 75 mg lomcebo asebenzayo. izingxenye Asizayo: colloidal Silica anhydrous, microcrystalline cellulose, stearic acid.
Acetylsalicylic acid is a non-steroidal izinto eqeda ukuvuvukala kokuba antipyretic, analgesic kanye antiplatelet umphumela. Main ingxenye yikhono umuntu azalwa nalo mncane igazi, ukunciphisa coagulation yayo by ezivimbela synthesis thromboxane A2 e platelet wokuhlanganisa. Lokhu kunomphumela vasodilating (ezincane). Medicine "Lospirin" kunciphisa ingozi isilethikusebenza, unhlangothi-cerebral palsy.
Ngo ipheshana wokugaya ukudla izidakamizwa amuncwa umzimba cishe ngokuphelele. Inqubo eziyisisekelo senzeka emathunjini amancane. Ngenxa containment kungenzeka ukunciphisa umphumela ongemuhle acetylsalicylic ene-asidi mucosa esiswini. Biotransformiroetsa isithako esibindini. Emzimbeni, izinto ngokushesha ukuhlanganisa uxhumano nomsebenzisi Amaprotheni egazi futhi yasakazwa kulo lonke uhlelo. Umzila eyinhloko ukuqedwa - nezinso.
Umuthi ngokuvamile zaphathwa iziguli nokuvinjelwa esivimba amanzi infarction (zamabanga aphansi naphezulu) ngoba angina pectoris. Lihlanganisa ubufakazi kulezi zimo ezilandelayo:
Isexwayiso isitsha occlusion emboli - izinhlayiya ukuthi ngokuvamile akufanele kube esikhathini serum igazi.
Ukuvimbela ubuchopho unhlangothi, uhlobo ischemic.
Zesikhashana kuhlasela ischemic (kunciphisa ingozi).
Prevention amahlule lihambe ngemithambo ejulile.
Ukuvimbela yisifo senhliziyo kubantu abasengozini.
Izimbangela sohlangothi yisifo senhliziyo
Stroke kuyinto isifo lapho kunyatheliswa igazi izitsha ubuchopho, isb iyeke ukwenza umoya-mpilo nezakhi ezidingekayo ekusebenzeni yayo evamile. Isimo siyefana ukuba isifo senhliziyo, okuyinto ngokuvamile sithinta imisipha yenhliziyo (myocardium). Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu yalezi pathologies - thrombosis kanye isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Endabeni unhlangothi ubuchopho kungenzeka ukopha, okuyinto eveza umahluko phakathi ezifweni esivimba amanzi.
Izinto eziyinhloko ungalokothi uphuze ekuthuthukiseni iziyaluyalu zenhliziyo zihlanganisa:
nomfutho wegazi ophezulu Essential (high blood pressure).
Ngifundise ngesifo sikashukela.
Izinkinga isisindo okweqile.
ukusetshenziswa njalo utshwala, ukubhema.
nezici ezithile Ukubambezeleka.
"Lospirin" imfundo manual incoma ukuthi ukuvimbela semithambo occlusion thrombus, igazi thinners. Izibhebhe acetylsalicylic acid ngesisekelo uthathwa ngokwanele ngempumelelo.
Izibhebhe embozwe enamathela ekhethekile esiza "ukuletha" ketshezi asebenzayo endaweni oya kuyo, okungukuthi, amathumbu, futhi ngaleyo ndlela kuncishiswe umphumela olimazayo esiswini. Ngakho-ke, akuvunyelwe ukuhlafuna imithi edilini lomshado. Umthamo kuzoncika uphethwe lesiguli.
Iziguli esolwa acute isilethikusebenza Kumele uthole ukulungiselela "Lospirin" endaweni umthamo mg ngelanga ukuvimbela ukufa 75 300. Inkambo Kunconywa yokwelashwa - 1 inyanga. Njengoba zokuvimbela yesibili ukuhlaselwa isifo senhliziyo kanye amaphilisi unhlangothi ukuthatha Uchwepheshe ohlosiwe. I umthamo wansuku zonke lisho ukuthi "Lospirin" - 75-300 mg.
Ngokuba nokuvimbela amahlule emva kokuhlinzwa ezikebheni iqondiswa 75-150 mg "Lospirina" usuku noma mg 300 Njalo ngemva kosuku olulodwa. Inani elifanayo lomcebo esebenzayo edingekayo ukuze iziguli abasengozini.
Izici zomuthi "Lospirin"
Ama-aspirin akufanele inikezwe iziguli ezingaphansi kweminyaka engu-16. Lokhu kungaholela nemiphumela engathandeki ezinkulu, njengalezo Reye Syndrome. kuphakama isimo sokugembula ezinganeni eziningi futhi intsha abaphuza imithi esekelwe acetylsalicylic acid. Nokugula ezithinta ukusebenza izinso, okubangela ubuchopho edema kanye ukuvuvukala kwesibindi. Anqume syndrome kungenziwa nokunwetshiwe by ukuhlanza ukuthi kwenzeka ngemva ukungenisa. isimo okunjalo kuyingozi kakhulu umzimba wengane futhi kudinga ukuba bathole ukunakekelwa kwezokwelapha ngokushesha.
Ukuqokwa kwesiKhulu izidakamizwa ngesikhathi sokukhulelwa
Kusho "Lospirin" ngesikhathi sokukhulelwa angaqoka udokotela kuphela uma eziphuthumayo. Phakathi izifundo zokwelapha kwatholakala ukuthi okusithiyayo of prostaglandin zamagama ayinakho ukonakaliswa umbungu ekuthuthukisweni utero nenkambo sokukhulelwa bebonke. Ngesikhathi esifanayo, acetylsalicylic acid kungenziwa iphathwe senyanga yokuqala lapho wabeka uhlelo eziyisisekelo-fetus.
Ngo senyanga okugcina enkathi yokukhulelwa, prostaglandin zamagama inhibitor kungadala ubuthi cardiopulmonary kanye nomthelela ekusebenzeni nezinso. Acetylsalicylic acid aluboniswa emabangeni lokugcina sokukhulelwa ukuze ugweme ukopha okungapheli okubangelwa antiplatelet senzo. Kukhona ingozi Ukuwohloka lesizalo umsebenzi, okuyinto yinde inqubo kwezidingo.
Uma kudingekile, izidakamizwa ukwelashwa ebekiwe umthamo ephansi futhi izifundo ezimfushane yokwelapha.
isiqondiso Specific on ukusetshenziswa kwezidakamizwa
Kufanele kuthathwe izinyathelo "Lospirin 75 'abantu hypersensitivity kuya ejenti eqeda ukuvuvukala kanye analgesic. Acetylsalicylic acid kungathinta izinso ukusebenza uma kukhona izifo ezifana ukwehluleka kwezinso, isimo semithambo sokugembula emlandweni nesineke.
Iziguli bathambekele komzimba kufanele kube ngokucophelela okukhulu ukuthatha amaphilisi. izingxenye ezisebenzayo uyakwazi ukuyenga bronchoconstriction, urticaria, ukulunywa kwesikhumba.
Ngisho ngemithamo emincane zomuthi kungathinta ngesilinganiso excretion of uric acid, okuyinto iyingozi iziguli okwatholakala sifo. Umthelela inhibitory lomcebo eziyisisekelo isihlobo ukuba aggregation platelet egcinwe izinsuku ezimbalwa. Ngakho-ke, kutuswa ukuba ayeke imithi ngaphambi kokuba sihlinzwe yokuqokwa (kuhlanganise futhi ngaphambi kokususwa izinyo) kuyinto izinsuku ezingengaphansi kwezingu 5 ukuvimbela ukopha.
Ngo khona amaphilisi isilonda peptic esekelwe acetylsalicylic acid ingasatshenziswa kuphela udokotela ukuba khona.
Nomuthi "Lospirin" imfundo manual sivimbela ukusetshenziswa, uma isiguli ukungabekezeleli noma hypersensitivity kuya izingxenye ekwakhiweni. Izibhebhe ingase isetshenziselwe nokwelashwa kweziguli thrombocytopenia, diathesis oluhambisana, hemophilia. Contraindication ubuye zokugula peptic yokusetshenziswa pheshana emathunjini ku-acute esiteji, izinso kanye isibindi ukwehluleka, yobudala engu-16 kuya, isifuba somoya bronchial.
Ukuxhumana nezinye izidakamizwa
It wawukwenqabela kanyekanye ukuthola acetylsalicylic acid ( "Lospirin" amaphilisi) kanye methotrexate uma yokugcina idlula umthamo seviki 15 mg. Gwema reception kanyekanye "Lospirina" futhi anticoagulants, thrombolytics. Lokhu kwandisa kakhulu ingozi ebangela ukopha.
Kuyinto engathandeki ukusebenzisa ebulilini izidakamizwa ngesikhathi esifanayo ne-ejenti nonsteroidal eqeda ukuvuvukala ukuvimbela ukuthuthukiswa peptic isilonda isifo wokugaya ukudla, futhi opha yokusetshenziswa pheshana emathunjini.
ukusetshenziswa concomitant zezidakamizwa digoxin ngcono yokugcina serum okuhlushwa. Umthelela hypoglycemic imithi kusukela iqembu elinabantu sulfonylurea okunye, esetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela, ngcono.
It is hhayi Kunconywa ukuthatha valproic acid esuka ukulungiselela "Lospirin" ukugwema ukwanda imiphumela enobuthi emzimbeni ka acetylsalicylic acid.
Izidakamizwa "Lospirin" imfundo unqabela okuhlangana ngayo utshwala. Izingxenye baqinise isinyathelo nomunye, okuyinto buhlungu kabili nolwelwesi lwamafinyila we ipheshana wokugaya ukudla. Ephambi kwezinduna ulceration kungenzeka ukuthuthukisa ukopha ukuthi kuyingozi enkulu empilweni isiguli.
Amalungiselelo esekelwe aspirin zingafundwa kuka 12 amahora ngemva kokuthatha iziphuzo ezidakayo. Kungenjalo, kunokwenzeka nemiphumela emibi umzimba.
Izimpawu ngokweqile imithi
izidakamizwa Overdose kuvamile kakhulu asebekhulile. Izici eziyinhloko uthi sokugembula yilezi:
Ukucanuzela kwenhliziyo nokuhlanza.
Ukuncishiswa ukuzwa acuity.
Kahle kungakhuphula izinga likashukela.
Ukuthuthukisa izidakamizwa eziyisisekelo imiphumela anobuthi okubangelwa ukwelashwa isikhathi eside noma idlula umthamo Kunconywa nsuku zonke. ubuthi Lokulingene baphawula phezu isizinda yokuphathwa okuphindiwe ebulilini umuthi. Uma lokuhlushwa oketshezini olungenambala lwegazi salicylates ephakeme kunaleyo 300 UG / ml, kukhona amathuba ubuthi acute, obonakaliswe ushintsho ibhalansi acid-base.
Iziguli izimpawu of ukweqisa izidakamizwa kufanele kube ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuthumela in a isikhungo sokwelapha lapho umkhiqizo ukuhlanzwa umzimba futhi abuyisele acid-base futhi electrolyte ibhalansi.
Abantu abaningi imiphumela emibi ngokuthatha amaphilisi baphawula phezu ingxenye pheshana emathunjini. Kungase kubangele ubuhlungu epigastric esifundeni nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo, ukuguguleka komhlabathi kanye izilonda emathunjini mucosal.
On the ingxenye isimiso semithambo yegazi ingaba ingozi opha amavesi acinene, izinsini, pheshana emathunjini. The esiphezulu iziguli engozini engozini ngoba ukopha ebuchosheni nomfutho wegazi ophezulu. Ezinye iziguli kubika ikhanda, tinnitus kanye iziyaluyalu orientation ngekwendzawo ngemuva kokuthatha imithi "Lospirin".
Iziyalezo ukusetshenziswa eziyisixwayiso mayelana kungenzeka abantu basabele ngendlela embi kusukela amasosha omzimba. Nge ukuzwela anda ukuze izingxenye zingavela ngesimo isikhumba ukuphendula isifuba ububomvu, ukulunywa.
"Lospirin": intengo kanye nokubuyekeza
Iningi iziguli ukuthatha izidakamizwa, niyajabula umphumela nomphumela omnene zokwelapha. Ngokungafani analogue, umthamo ke Kuthi ezincane, okuyinto kunciphisa ingozi yemiphumela emibi, efana tinnitus, inzululwane. Libuye uzinake ukuphepha isihlobo "Lospirin" izidakamizwa. Nobufakazi abonisa ukuthi, sibonga containment, kukhona nhlobo nomphumela ongemuhle izitho futhi mucosal ebusweni isimiso sokugaya ukudla bungene. Ukuncibilikisa izidakamizwa iqala kuphela emathunjini.
"Lospirin", intengo zazo kuhluka ruble 90 170. amaphilisi 30, zitholakale kalula kakhudlwana nezinye izidakamizwa antithrombotic iqembu. Umuthi kahle emile njengesiqondiso ngisho nokuvinjelwa thrombus ekwakhekeni, ukuthuthukiswa kobuchopho sohlangothi isilethikusebenza. Ukusebenzisa "Lospirin" uzimisele professional nokunamathela izincomo ngabanye ukuze bathole ukwelashwa, kungenzeka ukugwema imiphumela engemihle futhi side effects.
Imakethe ezithaka imithi inikeza uhla elikhulu imikhiqizo isinyathelo esifanayo. Imithi izidakamizwa "Lospirin" nozakwabo zimi kanje:
"Aspirin Cardio" - indlela ethandwa kakhulu thinners igazi ukuvimbela amahlule izitsha. Ingasetshenziselwa isikhathi eside.
"Aspekard" - ukulungiswa eqeda ukuvuvukala, analgesic kanye nomphumela antipyretic. Isetshenziswa njengesici izidakamizwa antithrombotic.
"Clopidogrel" - zokwenziwa antiplatelet izidakamizwa esetshenziswa nokuvimbela pathologies senhliziyo. The main isithako - Clopidogrel bisulfate.
"Emolium": kusho incazelo. Indlela thatha analog "Emoliuma?
Drops "Oftalmodek": yokusetshenziswa. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe izidakamizwa
Izidakamizwa for imikhuhlane. Yini imithi ukuwuthatha imikhuhlane
Ama-superfoods aqabulayo angu-10, okufanele adle kaningi kuleli hlobo
Monuments of Umlando Namasiko weRiphabhulikhi Altai. Gorno-Altaisk: izikhangibavakashi
Umuthi EASYnoSMOKE: Izibuyekezo wangempela odokotela kanye abathengi
Izikhali Psychotronic. izikhali okunqatshelwe
Izidakamizwa "Calcemin": yokusetshenziswa, ukwakheka, Izimo
Chocolate ikhekhe "Sacher", kokubili kusuka saseVienna khekhe esitolo
Ihhotela Saigon ấm Nhum kuyona 4 * (Vietnam): incazelo kanye nezithombe